Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona oo aad u daneynayo saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda AS Roma. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona oo aad u daneynayo saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda AS Roma.
Warbixin: Macalinka kooxda Barcelona oo aad u daneynayo saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda AS Roma.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:17 PM Macalinka kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa lasoo warinayaa inuu xiiseeneyso saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda AS Roma Miralem Pjanic.
Pjanic waxaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo midkood kooxaha ka dhisan horyaalada Germany iyo England todobaadyadii eynu kasoo gudubnay, wallow horaantii bishan kooxda AS Roma ay biyo qabow ku shubtay wararka sheegayo in Miralem uu ka hayaamayo gegida Olympico.
Sida lagu daabacay maanta wargeyska Corriere dello Sport, Pjanic waxaa baadi goobkiisa kusoo biirtay kooxda Catalans ka dhisan ee Barca, waxa ayna kooxdan reer Spain dooneysaa iney dhameystirto saxiixiisa kahor inta uusan bilaaban koobka Euro 2016 ka.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in 26 sano jirkan uu kula kooxda AS Roma heshiis gaarayo ilaa sanadka 2018 ka, waxa uuna u saxiixay kooxda reer Talyaani 12 gool 41 kulan uu kasoo muuqday xilli ciyaareedkii soo gaba gaboobay ee 2015/2016 ka.